Vaovao - Manara-maso ny fikojakojana ny vatana ny mpanara-maso ny fiara
Ny mpanara-maso ny fiara dia mijery tsara ny fikojakojana ny vatana
1. Tandremo ny fitazonana ireo zava-misy eo amin'ny tontolo iainana. Ny fampiasana ny tontolon'ny milina fanaovana dokam-barotra dia hisy fiantraikany mivantana amin'ny fampiasana ny vokatry ny milina fanaovana dokam-barotra sy ny fiainana, raha toa ka manjelanjelatra loatra ny jiro, na jiro mivantana mihitsy aza, amin'ny lafiny iray misy fiantraikany amin'ny fifandraisana an-tsary ny milina fanaovana dokambarotra, amin'ny lafiny iray kosa dia hanimba ny jiro mivantana. ny singa elektronika efijery. Ankoatr'izay, ny hamandoan'ny rivotra amin'ny tontolo iainana misy ny milina fanaovana dokam-barotra dia tokony ho mety. Ny hamandoana be loatra amin'ny fitaovana elektronika dia tsy hisy fiantraikany amin'ny fizotran'ny fizaran-tany ary hiteraka olana.
2. Tandremo ny fikojakojana ny vatana. Ny fampiasana ny vatan'ny milina fanaovana dokambarotra mihitsy dia fetra iray fotoana, ny fiovan'ny vatana dia hiteraka fahavoazana amin'ny milina fanaovana dokambarotra, ny famadihana matetika dia hamorona fahasimban'ny singa elektronika efijery ihany, hisy fiantraikany eo amin'ny fampiasana milina fanaovana dokam-barotra, hisy fiatraikany amin'ny fiainany.
3. Tandremo ny fitazonana ny fahaiza-manao. Ny fitaovana elektronika dia hiseho matetika ny trangan-javatra herinaratra mijanona, ny masinina fanaovana dokambarotra dia tsy misy ankanavaka. Ny herinaratra mijanona dia mety hiteraka vovoka avy amin'ny rivotra hifikitra amin'ny masinina fanaovana dokam-barotra, ka hadio araka ny tokony ho izy. Rehefa vita dia tsy azo ampiasaina ny lamba lena. Ny fitaovana mando dia tsy vitan'ny hoe tsy azo antoka fa mety hamorona boribory mando koa, noho izany ny fikojakojana ny milina fanaovana dokam-barotra dia tokony handinika ny fahaiza-manao.
4. Tandremo ny fikolokoloana madio. Manaraka ny fahazarana manadio tsy tapaka ny milina fanaovana dokam-barotra, azonao atao ny mampiasa lamba lena handiovana ny efijery LCD, tandremo ny manandrana tsy mifidy lamba mando misy hamandoana be loatra, hisorohana ny rano ao anaty efijery ary hitarika ny LCD anatiny fohy faritra sy hadisoana hafa. Manolo-kevitra ny hampiasa lamba solomaso, taratasy solomaso ary fitaovana fanosotra malefaka hafa hikosehana ny efijery LCD. Halaviro ny gorodona tsy ilaina amin'ny efijery milina fanaovana dokam-barotra.